Ciidamada Dowlada oo magaalada Mogadishu ka baadi goobaya shabaabkii ka baxsaday xabsiga… – Hagaag.com
Ciidamada Dowlada oo magaalada Mogadishu ka baadi goobaya shabaabkii ka baxsaday xabsiga…
Ciidamada Dowladda Somalia ayaa Magaalada Muqdisho ka baadi-goobaya Mubaarak Ibraahim Iidle, oo ah ninka keliya ee ka tirsan Ururka Al Shabaab, kana baxsaday Xabsiga Dhexe ee Xamar, maalintii Isniinta.
Mubaarak Ibraahim Iidle oo ka mid ahaa maleeshiyadii Al Shabaab ee ka dhex dagaalantay Xabsiga Dhexe ee Xamar ayaan la garanayn halka uu jaan iyo cirib-ba dhigay.
Ciidamada Dowladda oo ay taageerayaan kuwa Sirdoonka ee dharcadka ayaa Magaalada Muqdisho ka baadi-goobaya ninkaasi, tan iyo markii ay soo ifbaxday inuu yahay maxbuuska keliya ee baxsadka ku maqan.
Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida ayaa sanadkii 2014 ninkaasi 10 sano ugu xukuntay argagixisnimo, ka dib markii Ciidamada Dowladda ay ka soo qabteen deegaanka Ceelasha Biyaha ee duleedka Magaalada Muqdisho.
Sii Hayaha Xafiiska Ra’iisal Wasaaraha, Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) ayaa dhacdadii Xabsiga Dhexe u xil saaray guddi soo baara. Guddigan ayaa ka kooban lix xubnood oo loo igmaday inay dhacdadaasi baaritaan ku soo sameeyan.
Hadalhaynta ugu badan ee dadka Soomaaliyeed, dal iyo dibadba ayaa noqotay weerarka markii ugu horeysay laga dhex abaabulay xabsiga ugu weyn Magaalada Muqdisho, aadkana loo ilaaliyo.